Easter 2019: jawi duufaan u ah ugaadhsiga ukunta? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » madadaalo • UNES • DIINTA • Uncategorized Easter 2019: jawi duufaan u ah ugaadhsiga ukunta?
Easter 2019: jawi duufaan u ah ugaadhsiga ukunta?
Sannadkan, Easter ayaa la qaban doonaa Axadda 21 Abriil waxaana lagu kordhin doonaa Isniinta 22 April. Qorraxdu ma joogi doontaa fasaxii Easter weekend? Iyo haddii aad doorato fasax sabtida ah oo dibedda ah, halkaa si aad u hesho jawiga ugu wanaagsan?
Niyadjab waxaa lagu dejin doonaa Bay of Biscay. Waxay soo saari doontaa hawada khafiif ah oo aan ciriiri ahayn, oo ay weheliyaan qubayska.
Duufaan roobeed oo koonfur ah
Sabtida iyo Axadda, khatarta roobku way ka weynaan doonaan koonfurta marka loo eego waqooyiga, iyadoo leh roobab kuleyl ah, gaar ahaan galabtii. Waqooyiga, cirku wuxuu noqon doonaa mid ka xishoon laakiin jawigu waa yar yahay.
Xilliga Isboortiga Isniinta, khatarta roobabku waxay u egtahay in ay wiiqantay natiijada xoojinta anticyclone ee Iskeelooyinka Britishka. Kaliya cidhifyada Mediterranean iyo cirifka koonfureed ayaa laga yaabaa inay xasiliyaan qaar ka mid ah xasillooni darro.
Thanks to dabayl koonfurta, waxay noqon doontaa mid jilicsan. Aroortii, ma jiri doonto khatarta dhaxan ee 5 at 12 ° C ee laga soo bilaabo waqooyi ilaa koonfur. Gelinka dambe, 20 ° C ayaa la rajeynayaa celcelis ahaan guud ahaan France.
Xagee lagu tagaa Faransiiska?
Fursadahan cimilada ah, dhammaan Faransiisku waxay ka faa'iideysan doonaan cimilada isbeddelaysa ee ku haboon hawlaha bannaanka, iyada oo maskaxda lagu hayo in khatarta duufaanka aan laga saari karin ilaa maanta. Barafka buurta ayaa ka hooseeya 1500 heerka sare ee heerkulka xilliga caadiga ah, laakiin barafka ayaa si sax ah u ahaan doona xarumaha sare ee Alps iyo Pyrenees. Mar labaad, haddii ay dhacdo cimilada duufaanka, cimilada buuruhu waxay noqon kartaa mid aad u kacsan.
Sida for xeebahakuwa ka mid ah kanaalka ayaa u muuqda midka ugu hubsashada qorraxda, halka u dhow Atlantic iyo xeebaha Mediterranean, cimiladu waxay noqon kartaa duufaan. Baahan in la yiraahdo, waqtigan sanadka, biyaha badda waxay joogayaan meel qabow, kudhow 12 ° C ilaa 14 ° C laga bilaabo Kanaalka ilaa Badda Mediterranean.
Easter: fasax masiixi ah
Sannadkan, dhammaan Masiixiyiin Easter weekend ayaa ku dhacaya Axadda 21 April. Axada Axadda ayaa lagu soo gabagabeynayaa Toddobaadka Quduuska ah oo ka bilaabanaya Palm Sunday, 14 Abriil sanadkan. Isniinta 22 April wuxuu noqon doonaa fasax, laga soo bilaabo sharciga 8 March 1886.
Toddobaadka Quduuska ah waa maalmaha ugu dambeeya ee Ciise Masiix, inta lagu guda jiro dhacdooyinka muhiimka ah ee la dabaaldegayo. Xaqiiqdii, inta lagu jiro todobaadkan Masiixiyiintu waxay xusuusinayaan Khamriga Khamiista marka hore. Waxa ay ahayd inta lagu guda jiray maalintaan in Ciise uu cunnadii ugu dambeysay la qaatay rasuulladiisa, waxa la yiraahdo Cashada Last. Iskutallaabtu waxay dhacdaa maalinta ku xigta, oo ah Jimcow Wanaagsan. Masiixiyiintu markaa waxay isu soo ururiyaan Sabtida Quduuska ah, inta lagu jiro fiidnimada habeennimada Easter. Ugu dambeyntii, Axadda Easter wuxuu yimaadaa si uu u xiro Toddobaadka Quduuska ah iyadoo sarakicidda Ciise Masiix uu u dabaal-dagay dhammaan Masiixiyiinta adduunka.
Taariikhda Paster-ka: Maxaa is bedelaya?
Easter ma dhaco isla taariikhdaas sanad kasta. Tusaale ahaan, in 2018 Easter ayaa dhacay Abriil 1er halka sanadkan 21 uu dhaco sanadkan. Taariikhda Easter waa had iyo jeer inta udhaxeysa 22 March iyo 25 April, mudadaas oo ay soo bandhigeen Golaha Nicea ee 325. Waxay ku saleysan tahay jadwalkeena Gregorian iyo xisaabinta isku dhafan oo loo yaqaan "comput". Maalinta Easter-ka waxay u ogolaaneysaa xisaabinta taariikhda fasaxyada kale ee kiristaanka, sida Bentakostiga ama Maalinta Asaasiga.
Asalka kaabashka ah ee ukumaha iyo ukunta paster
Sannad kasta, caruurta da 'kasta oo da' kasta jecel inay sugaan ugxanta ugxanta iyo raadi nalalka shukulaatada ugu fiican ee dhammaan midabada. Duubannada keenaya ukumaha shukulaatada waxay la xiriiri doonaan xaqiiqda ah in laga bilaabo Khamiis, Qaar ka mid ah kaniisadaha Masiixiyiinta ah oo aan mar dambe ku soo galin calaamadda murugada. Axadda Axadda, waxay mar kale u yeedhaan inay u dabaaldegaan sarakicinta Masiixa, maalinta ay ukuntu is dhaafsadaan. Taasi waa sababta aan u sheegno in dawanno ay keenaan ukunta Easter.
Dhinaca kale, bixinta ukunta inta lagu jiro waqtigan waxay noqon kartaa caadada dhaxalka Faaris iyo Masriyiinta, 5000 sano ka hor xilligeena. Ukunta ayaa horay loogu soo bandhigay habka guga, calaamadaha nolosha.
Suudaan: Madaxa Golaha Xukuumadda KMG ah ayaa is casilay